कृपया नोट गर्नुहोस्: कोविड -१ Jan जेनेट ओस्सेबार्ड (Ninefornews) वृत्तचित्र एक नक्कली समाचार जाल हो: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	23 मार्च 2020 मा	•9टिप्पणिहरु
स्रोत: पूर्ण रूपले जोडिएको। एनएल
कोविड - १ Jan जेनेट ओस्सीबार्ड (क्रप सर्कल, नौफर्नवुज) कोरोनाभाइरस वृत्तचित्र (तल हेर्नुहोस्) एउटा पासो हो। तपाइँ सचेत हुनुपर्दछ कि आईबीएमको गहिरालो ब्लू सुपर कम्प्यूटर 1996 मा अल २०१ champion मा शतरंज र गुगल वर्णमालाको क्वान्टम कम्प्युटरको साथ विश्व च्याम्पियन कास्परोभको सबैभन्दा जटिल खेलको विश्व च्याम्पियन हराउनको लागि व्यवस्थित गर्नुहोस्। थप रूपमा, तपाइँ सचेत हुनुपर्दछ कि मिडिया आफैंमा सबै थोक (षडयन्त्र सिद्धान्तहरू सहित) सबै सुरूवात गर्न सक्षम छन्।
उनीहरूले सबै कुरा फिल्मको रूपमा सँगै राख्न सक्छन् र तपाईलाई सोच्न लगाउँछ कि यो साँच्चिकै समाचार हो, ताकि न्युचेक। एनएल जस्ता नक्कली समाचार चेकर्सहरूले यसलाई पछिल्लो चरणमा जलाउन सक्छन्। सबै ठूला डाटा आज भेला भएपछि, विश्व नेताहरू जनतालाई सूक्ष्म लक्ष्यीकरण स्तरमा कसरी खेल्ने भन्ने कुरा जान्दछन्।
यी सबैको बारेमा चतुर कुरा यो हो कि त्यहाँ आफैंले बनाएको नक्कली खबरहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ भन्ने तथ्यमा धेरै सत्य छ, तर पछि मानिसहरूले नक्कली समाचार छ भनेर “प्रमाणहरू” लिएर आएका छन्, तिनीहरूले बच्चालाई नुहाउने पानीले बाहिर फ्याँक्न सक्छन्।
म तपाईंलाई यो कुरामा जोड दिन चाहन्छु र तपाईंलाई मेरो पुस्तक पढ्न र वितरण गर्न सल्लाह दिन्छु। तपाईलाई नियन्त्रित विपक्षीका रणनीतिहरु देखाउने कोही छैन। नाइनफोर्न्युज हैन, वान्ट टोकनु छैन, जेनसेन हैन, निबुरु हैन, इन्फोवार्स हैन। किनभने तिनीहरू अन्तिम रेखा हुन्। यसमा बगैंचा नगर्नुहोस्! मा यो लेख र मेरो पुस्तकमा म यस नियन्त्रण विपक्षी रणनीति विस्तार मा वर्णन गर्दछु।
यहाँ अन्तिम लाइन विधि को एक उदाहरण को लागी सुन्नुहोस्: voorbeeld
यस पोष्टबाट metro.co.uk जेनेट ओसेटबारार्ड द्वारा त्यो भिडियो कसरी चाँडै नक्कली समाचारको रूपमा लेबल लगाइनेछ हेर्नुहोस्।
माफी चाहन्छु, म मूर्ख र चतुर हुन चाहन्न, तर मैले सात बर्ष भन्दा पहिले मेरो जागिर छोडिदियो किनकि म मिडियामा रहेको झूटहरूबाट रिसाएको थिएँ। त्यस समयमा, उदाहरणका लागि, म अझै पनि एलेक्स जोन्सको इनफवारहरूमा विश्वास गर्दछु र वैकल्पिक मिडिया सर्किटमा समाप्त भएँ। त्यसोभए मैले भित्रबाट पत्ता लगाउन सकें कि ती काँटीमा भएका यी अनौंठो हावामा उनीहरू सबै खुशी थिएनन् (हेर्नुहोस्) व्याख्या).
तेज हुनुहोस् र सुरक्षा जालहरू र नियन्त्रित विपक्षी इन्द्रेणी योद्धाको लागि नहेर्नुहोस् (हेर्नुहोस् मेरो किताब तथापि, थप व्याख्याको लागि भोरल यो उत्तरकथा).
हालका दिनहरूमा, धेरै भिडियोहरू मलाई जालमा पार्न र मलाई यस्ता सन्देशहरू पोष्ट गर्न प्रेरित गर्न पठाइएको छ जुन नक्कली समाचारको रूपमा लेबल गर्न सकिन्छ; सम्भवतः मेरो साइट कालो बनाउन को लागी। त्यसोभए तपाई साँच्चिकै आफ्नो गार्डमा रहनु पर्छ र आलोचनात्मक रहनु पर्छ। मेरो पुस्तकमा म वर्णन गर्दछु कसरी जानकारीको एकमात्र सही स्रोतमा जान (तपाइँको मूल) र हामी कसरी यो भाइरस प्रणालीको सामना गर्न सक्छौं।
"विपक्षलाई नियन्त्रण गर्ने उत्तम तरिका यसलाई आफैले नेतृत्व गर्नु हो", भ्लादिमीर लेनिन
स्रोत लिङ्क सूची: destentor.nl, नोफर्न्यूज .nl, wikipedia.org bbc.com
किन Ole Dammegard वैकल्पिक मिडियाको लागि ठूलो सम्पत्ति हो
किन हामी जर्ज वान होट्स जस्तै मान्छे को माध्यम ले 911 सुरक्षा नेट मा लिप्त हो
मार्टिन भिजल्याण्डले नियन्त्रणमा लिएको छ? होइन: यहाँ पढ्नुहोस् किन यो कुरा होइन!
ट्याग: विकल्प, खराब पानी, षडयन्त्र साइट, साजिश सिद्धान्त, साजिश सिद्धान्तहरू, नियंत्रित, कोरोनाभाइरस, Covid-19, वृत्तचित्र, नक्कली, विशेष, जेनेट, दयालु, औसत, नकली समाचार, समाचार, नोफर्न्यूज, oppiton, बैज-दाह्री, valcabal.nl, जाल
23 मार्च 2020 मा 23: 25
उदाहरण को लागी, के तपाई साँच्चिकै विश्वास गर्नुहुन्छ कि रॉबर्ट जेन्सेन वास्तविक विपक्ष हो? उसले राम्रो भिडियो बनाउँछ! तपाईको स्टुडियो कसलाई लाग्छ उसले आफ्नो कार्यक्रम बनाउन भाडामा लिन्छ? त्यो (सामान्य डच प्रेस एजेन्सी) जोन डी मोल सायद?
वास्तवमा उठ्नुहोस् ... सुरक्षा जालहरू: अन्तिम रेखा
तिनीहरू फाइनल भट्टीमा - अनुयायीहरू र सबैको साथ - भरिएको सुरक्षा नेट टिप गर्न क्रममा एक घोटालाको साथ हटाइन्छ।
वास्तविक परिवर्तन क्यामेरा पछाडि पुरुष र महिलाबाट आउँदैन! त्यो भ्रम मा राख्छ कि तिनीहरूले यो तपाइँको लागी व्यवस्था गरीन्छ। वास्तविक परिवर्तन आफैलाई सक्रिय पार्नेबाट सुरू हुन्छ!
23 मार्च 2020 मा 23: 45
तपाईं कसरी मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ जस्तो उनीहरू Teletubbies हेरिरहेका छन्। तिल स्ट्रीट! ... Pffff बकवास संग सत्यको मिश्रण गर्न रोक्नुहोस्! "क्याबाल," "ट्रम्प उद्धारकर्ता," "क्यू" ("तपाईंको लागि राम्रो छ"), र सुरक्षा प्रकारको थप त्यस्तै थियरीहरू।
महोदमीले कम्युनिष्ट विचार गोप्य रूपमा प्रचार गर्दछन्!
ट्रम्प उद्धारक होइन! र यो 'क्रप सर्कल' नाम गरेको वित्तीय रिसेट उचित तरिकाले योजनाबद्ध छ र अब तपाईको आँखा मुनिको उब्जने कुराको माध्यमबाट प्रस्तुत हुँदैछ, ट्रम्पको हुडमा। टेक्नोक्रेट कम्युनिष्ट (निरंकुश) "सल्वेशन राज्य" तिर सडक नक्शा .. 'बाली सर्कल' जेनेट ओसेटबारार्ड द्वारा प्रचारित। टेक्नोक्रेटिक साधन: टेक्नोलोजीद्वारा नियन्त्रित ... त्यसैले एआई ... बिग डाटा: टेक्नोक्रेट साम्यवादको चिनियाँ मोडेल! एक अधिनायकवादी कम्युनिष्ट ठूलो भाई समाज! यही महिलाले प्रचार गरिरहेको छ!
24 मार्च 2020 मा 00: 20
हे जोन डि मोल: डिभर्ट्ज बल्क यस सेफ्टी नेट रणनीतिका लागि उत्तम विकल्प हुने थिए…।
24 मार्च 2020 मा 00: 35
उद्धरण (:9: min० मिनेट): "यदि सोशल मिडियाको कुल तालाबन्दी छ भने डराउनु पर्दैन किनभने भ्रष्ट सरकारहरूलाई पक्रनका लागि अपरेसन डिफेन्डर २०२० खटाइएको छ।"
कुनै 'फसल सर्कल' ... यो एक अर्कासँग कुराकानी गर्न मानिसहरूलाई रोक्न प्रयोग हुनेछ, ताकि यो अन्तिम कैदको विद्रोह नहोस्।
24 मार्च 2020 मा 01: 15
शिल मीचा क्याट समान Q अनन सुरक्षा नेट कहानी प्रवर्धन गर्दछ
24 मार्च 2020 मा 11: 49
कुल पागलपन। र तल टिप्पणीहरू पढेका छन्, ती पनि हुक, लाइन र सिन्करमा लात हान्छन्। अवश्य पनि उनीहरूले सकारात्मक सन्देशलाई विश्वास गर्न चाहन्छन्।
ठूला भाईले हामीलाई दुष्ट कुलीन वर्गबाट ​​जोगाउने छ, ठूला भाईलाई प्रेम गर्ने, ठूलो भाईलाई विश्वास गर्ने, ट्रम्पलाई विश्वास गर्ने, सेनालाई विश्वास गर्ने। शान्ति प्रेम र सद्भावको नयाँ विश्व क्रम देखा पर्नेछ
तिनीहरू धेरै भयभीत हुनेछन् जब ढिलो हुनेछ।
अमेरिकामा पनि तपाईसँग अब यस किसिमको पागल व्यक्ति छ जसले यस प्रकारको सन्देश पठाउँदै छ। Sasquatch हामीलाई बचाउनेछ, एलियन्सले हामीलाई बचाउनेछ, ट्रम्पले हामीलाई बचाउनेछ, सेनाले हामीलाई बचाउनेछ।
24 मार्च 2020 मा 12: 29
यस भिडियो अन्तर्गत धेरै गीतात्मक प्रतिक्रियाहरू (covid19 भाग 3)। टिप्पणीहरूको पछाडि केहि खाताहरू हेर्नुहोस्। धेरैसँग उही यूट्यूब भिडियोहरू र १ वा २ सदस्यहरू छन्। अनौंठो YouTube खाताहरू नक्कली खाताहरू जस्तो देखिन्छ वा केही उही व्यक्तिद्वारा सिर्जना गरिएको
24 मार्च 2020 मा 12: 33
यो नक्कली खाताहरू, गहिरो नक्कली खाताहरू र एआई बट्सले भरिएको छ जुन सामाजिक मिडियामा प्रतिक्रिया दिन्छ। अब तपाईं गम्भीर सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा प्रतिक्रिया लिन सक्नुहुन्न र तिनीहरूलाई उपेक्षा पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
24 मार्च 2020 मा 16: 43
« बिल गेट्स 'क्वान्टम डट्स' वायरलेस आईडी कार्ड जसले तपाईंको कोरोनाभाईस छ वा छैन र पनी तपाईंको खोप लगाइएको छ भनेर ट्र्याक राख्दछ।
कोरोनाभाइरस कोविड -१ lock लकडाउन अपडेट: जब तपाईं उठ्नुहुन्छ र महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईं फस्नुभयो, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? »
कुल भ्रमण: 1.285.007
कोरोना संकट: यो कहिले हो र अब हामीले के गर्नुपर्छ?
'क्याबलको पतन' बकवास र 'क्यू अनन' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) को हुन्?
जर्मनी एक कोरोनाभाइरस अनुप्रयोगमा काम गर्दैछ जुन तपाईंसँग कसको सम्पर्कमा आएको छ भनेर ट्र्याक राख्दछ
कोरोनाभाइरस कोविड - १ lock लकडाउन उपायहरू अप्रिल extended मा विस्तार भयो र यो धेरै भारी हुन्छ
सनशाइन op कोरोना संकट: यो कहिले हो र अब हामीले के गर्नुपर्छ?
ह्यारी फ्रिज op कोरोना संकट: यो कहिले हो र अब हामीले के गर्नुपर्छ?
मार्टिन भिजल्याण्ड op कोरोना संकट: यो कहिले हो र अब हामीले के गर्नुपर्छ?
विद्रोही op कोरोना संकट: यो कहिले हो र अब हामीले के गर्नुपर्छ?